I-Latinobarómetro, ingxelo ka-2011-iGeofumadas
NgoNovemba, 2011 Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Kukho i-Latin America efihlakeleyo emva komfanekiso ongenakucatshulwa wekhulu lama-20, siye saziguqula.
Nangona ubuthathaka bezopolitiko kunye nokungazithembi kuluhlu lwe-ajenda yendawo, inkqubela phambili iyaqhubeka ingapheli. Ummandla omtsha ukhangela ukuba uqhube ukuhamba ngokukhawuleza kunamazwe, ukusabalalisa iziqhamo zokukhula, ezifunwa ngamandla kunyaka lwe-2011 kuba ukuphuculwa kwezinto kubathinta. Le Latin America ijezisa ngokukhawuleza.
Abayisishiyagalombili kwabalishumi baseLatin America baxhunyaniswe kwihlabathi ngokusebenzisa iifowuni, kwaye abane kwi-10 namhlanje banomgangatho wemfundo ngaphezu kwekhaya ababezalelwe kuyo. Liyindawo ephakathi ekhulayo ekhuselayo.
Oku okubhaliweyo Intshayelelo 2011 ingxelo epapashwe yi-Latinobarómetro Corporation, kunye 112 amaphepha-manani ezithathwe 20,204 ubuso ngobuso ndlebe kumazwe 18 phakathi 15 Julayi ne 16 Agasti, kunye iisampuli elimele 100 %, kubemi besizwe ngasinye se-1,000 kunye ne-1,200, kunye nomda wephutha le-3% kwilizwe ngalinye.
Ininzi yale ngxelo ayikho into emitsha, nangona kuyathakazelisa ukubaluleka okuthelekisayo, apho sibona indlela ilizwe lethu lihambelana ngayo nomxholo.
Into ebangela umdla kukuphikisana okuphezulu kunxibelelwano, iliza elifakwe lilizwekazi liphela, kodwa ngokuchaseneyo nenkqubela phambili ecothayo eya kwimbeko yelungelo lokushicilela. Logama ukusetyenziswa kwetekhnoloji kungalinganiswanga ekusetyenzisweni kwehardware kunye nokuhlonitshwa kwamaphepha-mvume, okuninzi esikwenzayo eLatin America akunakuzinza; hayi kwinqanaba likarhulumente kuphela kodwa nakwinkuthazo yeenkampani zabucala. Ikwalithuba elibalulekileyo leSoftware yoMthombo ovulekileyo.
Ngesihlandlo sokuqala esi sifundo sichaza ngokucacileyo ubugqirha kwaye sibona ukuba ubugqirha bukhulu kunokuba uzimisele ukuthenga into ebiwe. Oko kukuthi, i-pirate ayibonakaliyo
njengokuba ibiwe. Le tshathi ilandelayo ayibonisi umthamo wobugwenxa ngelizwe, kodwa endaweni yoko yamkelwe njengesenzo esifanelekileyo.
Ndiyincoma ukuba uyigcine ixesha lakho lokuphumla, ndishiya inkcazo yezifundo zophando kunye nezigqibo ezigqibeleleyo ezingabonakali kweli lizwe ngalinye kodwa ziyakulinganisa ngendlela yendlela:
IEMEMOCRACY KWI-LATIN AMERICA
UKUQHUBEKA KUNYE NOKWENZA
IJENDA LATIN AMERICAN
UKUSEBENZISWA KWEBHAYIBHILE INDEX
INDEX YENKQUBO KWABASEBENZI
IIMVIWO ZOKWENZA IMARKET
IIMISEBENZI EZIPHUMA KOLUNTU
SATISFA WITH DEMOCRACY
UKUVALISWA KWAMAZIKO EMAZIKO EMFUNDO
Kukho i-Latin America efihlakeleyo emva komfanekiso ongathandabuzekiyo ozalwa ngekhulu lama-20 leminyaka, siye saziguqula thina, kodwa ihlabathi alinakuqiniseka.
Intando yesininzi idibanise ngokukhawuleza ixabiso layo eliphambili njengokuthobela umthetho. Oorhulumente ngamaziko athile athembeke kakhulu kule minyaka, nangona ku-2011, kukho imbuyiselo. Ipalamente iyakwazi ukuhamba ngokukhawuleza ekumthethweni kwayo. Inxalenye ebandakanyekayo kwingingqi ithi ikulindeleke enye kwixesha elizayo, oko kukuthi, lilindele ukuzinza. Uzinzo lwezoqoqosho luyinto entsha kwaye inomdla kwiLatin America. Ukuzinza kwengqesho kuye kwaphindaphindwa kabini kwiminyaka elishumi edlulileyo kwaye kufinyelela kwi-2011. Akukaze kubekho abantu abambalwa abanobunzima bezoqoqosho (10%). Abangabesine kwabayishumi baseLatin America namhlanje banomgangatho omnye wemfundo kunekhaya abazalelwe ngalo. Abalishumi abalishumi kwabalishumi baseLatin America baxhomekeke kwihlabathi ngokusebenzisa iifowuni. Ummandla ususwe eUnited States, elo lizwe lizwe lisizwe ikakhulukazi kwiCentral America, ngelixa uMzantsi Melika uqhubeka ukhangela kwezinye iindawo zehlabathi, ngakumbi iYurophu. Ngaphezu kwakho konke siye sandisa ukwaneliseka kobomi bethu, ezizimeleyo kwizandla. Akukho nto iguqula ulonwabo olwandayo. Ummandla uye wongezelela ukusetyenziswa kwabemi base150 abemi kwishumi elidlulileyo.
Ngaloo xesha i-backpack yamacici aphezulu. Iqala iingxaki zoqoqosho awuthobe inxalenye ebalulekileyo yabantu abafumana imivuzo ephantsi, izindlu nezima, kuphela impilo, imfundo esemgangathweni amahlwempu, ukufikelela lo gama ngqesho ke enye amanqaku emazantsi ayo. Ukungalingani kusoloko kuyingozi enkulu, ubandlululo njengelona luphumo olusondeleyo lwenkcubeko. Ukunyamezela nokuthembela kuphantsi, asizithembi amaqela ezombusazwe, asithembeli bethu abamelwane. Idemokhrasi ayinakukwazi ukutshintsha ezo nxu lumano zentlalo. Ngonyaka we-2011, sasijezisa ngokubanzi oorhulumente be-111, ngakumbi abo babenze umsebenzi wabo wesikolo kunyaka ophelileyo. Utshintsho lomlawuli ngenye yezizathu zokufuna okungakumbi, kodwa kukho imeko yokukhathazeka ngenxa yokuba ukwanda kobutyebi akungeniseli ukuhanjiswa okulindelekileyo. Oorhulumente abahluleki ukwandisa umbono olawulwa uninzi. Kukho uvakalelo lokuxhaphazwa kunye namalungelo angenakuncedo.
Latin America wabonisa phakathi 2007 2009 yaye ndakwazi lungisani nempembelelo yale ntlekele kunye nemigaqo-nkqubo countercyclical yezoqoqosho loo nto ayizange yenzeke e 2011, kunye nokuthoba
ukukhula koorhulumente abakhange bathathe manyathelo okunciphisa le mpembelelo kwabona basemngciphekweni. Impembelelo entle kulawulo lwentando yesininzi phakathi kuka-2007 no-2009 yayiyimbali, oorhulumente bakwazi ukurhoxisa uqoqosho kuvavanyo lwentando yesininzi, bavelisa ukwanda kwindlela elungileyo nangona bekukho ubunzima. Ngo-2011 loo mpembelelo iyanyamalala. Kusafuneka sifunde ukuba amahla-ndinyuka oqoqosho achaphazela amacandelo ohlukeneyo eluntwini ngendlela eyahlukileyo. Kwelinye icala, ukwanda kokukhula akuvelisi ulwabiwo, kwaye kwelinye icala, ukwehla kokukhula kunefuthe kwabona basesichengeni. Ke abo banokuncinci abaxhamli ekukhuleni kwaye bohlwaywa kukwehla.
Latin America zamahlengezi, leyo iye yavela 30 iminyaka iinkqubo zentlalo kunye guqula, lelinye Latin America ayisekho ilizwe 'uze ubuye kusasa "okanye umfanekiso beyenza movies Hollywood. Lo mmandla omileyo eneemfuno eziphakamileyo zemfuno zokuqhubela phambili kwiimpembelelo kunye nemida ekujoliswe kwintlalo evulekileyo kunye nentando yeninzi ngokusebenzisa indlela engavumelaniyo kunye namadireji aphezulu.
Apha ungakwazi umxokozelo, kunye neenguqu zangaphambili ezivela kwi-1995.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Yenza ukuhlelwa e CivilCAD
Post Next Inkqubo ye-AutoCAD nge-tutor onlineOkulandelayo »